I-Android Pie ngoku iyafumaneka kwi-Xiaomi Mi A2 kunye ne-Motorola One Power | I-Androidsis
I-Android Pie iza Xiaomi yam A2 kunye ne-Motorola Moto One Power. Ezi ziifowuni ze-Android enye kwaye ziqhuba ingxelo esemgangathweni ye-Android. Ke kuyothusa ukuba zombini iimodeli zifumana uphuculo oluzinzileyo ukusuka Android Pie Ngoku, yile nto Inkqubo enye kaGoogle imalunga nayo, enika uhlaziyo olukhawulezayo.
Ekuqaleni kweveki, kwaxelwa ukuba iMi A2 ifumene uhlaziyo lwe-beta kwi-Android Pie, ngelixa inguqulelo yeMotorola One Power enePie yabonwa ngaphambili eGeekbench. Ngoku siyabona ukuba oku kubangela ikhupha le nguqulo yale nkqubo yokusebenza kwezi smartphones.
Uhlaziyo lweMi A2 yi-1067.7 MB ngobukhulu kwaye izisa amanqaku afana ne-Adaptive Battery kunye ne-Adaptive Brightness, inkqubo entsha yokuhamba, kunye neeapps ezinconywayo kunye nezenzo ezisekwe kwimeko yomsebenzisi. (Fumanisa: IXiaomi Mi A2 kunye neMi A2 Lite sele zikhona eSpain).
Ku Motorola One Power, uhlaziyo kuthiwa luzisa ubomi bebhetri obude kunye nophuculo, ujongano lomsebenzisi omtsha kunye nemenyu yoSeto oluKhawulezileyo, kunye nescreen sokuhlaziya. Ukwafumana ukukhangela ngokusekwe kwiswipe, Dual SIM Dual VoLTE inkxaso, ukusebenza kwekhamera okuphuculweyo (imifanekiso ye-panoramic kunye ne-low-light), kunye nolawulo lwevolumu olwenziwe lula.
Uhlaziyo lukhutshwa kuzo zombini izixhobo eIndiya ngoku ngoku, kodwa kufanele ichaphazele eminye imimandla kwiintsuku okanye kwiiveki ezizayo. Gcina ukhumbula ukuba uhlaziyo luhlala lusasazwa ngeebhetshi, imimandla kunye nezinye izinto ezenza ukuba usasazo lwabo lungasoloko lufana kwihlabathi lonke.
Ukubona njengeXiaomi Mi A2 kunye neMotorola One Power sele bephumile, sijonge phambili kukwahluka kwamandla abo, I-Mi A2 Lite kunye Motorola Enye, Fumana uhlaziyo oluzinzileyo kwakamsinya kwaye ngaphambi kokuphela konyaka. Okwangoku, oku kuya kuhlala kubonakala.
(I-Fuente: 1, 2)
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Android Pie iyaqhubeka nokwanda: ngoku iyafumaneka kwiXiaomi Mi A2 kunye neMotorola Moto One Power